Tu Maung Nyo – Law & Order in Burma – Which Way? | MOEMAKA (stop) PRESS !!!
← Suu from 54-56 University Avene urged Cease-Fire & Ending of Civil War
Nyo Htat (Lan Thit Oo) – Htoun Htaun →
Tu Maung Nyo – Law & Order in Burma – Which Way?
ဇူလိုင် ၂၈ ၊ ၂၀၁၁
“ဇူလိုင် ၂၅ တွေ့ဆုံမှုနဲ့စပ်လျဉ်းပြီး NLD ကထုတ်ပြန်မယ့် ကြေညာချက်ကိုလည်း ယခုလို ဆက်လက် လေ့လာ ကြည့်ကြ တာပေါ့” ဆိုတဲ့ဝါကျနဲ့ “ဇူလိုင်၂၅တွေ့ဆုံမှု” ဆောင်းပါးကို ကျနော် နိဂုံးချုပ်ထားခဲ့ပါတယ်။ “ဇူလိုင်၂၅တွေ့ဆုံမှု”နဲ့ပတ်သက်ပြီးဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က NLD ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ အစည်းအဝေးမှာ အသေး စိတ် တင်ပြခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ သတင်းကြားသိရပါတယ်။
“တင်ပြချက်တွေအားလုံးဟာ မနေ့က ပူးတွဲကြေငြာချက်ထုတ်ပြန်ထားပြီးဖြစ်တဲ့အတိုင်းပါဘဲ။ ဒါကြောင့်မို့လို့ ဗဟိုအလုပ် အမှုဆောင်အဖွဲ့ကလည်း လက်ခံသဘောတူကြောင်း မှတ်တမ်းတင်လိုက်ကြပါတယ်။ နောက်ထပ် အသေးစိတ် ကျနော်တို့ ထုတ်ပြန် စရာမရှိပါဘူး” (ဒီချုပ်ပြောခွင့်ရ ဦးအုန်းကြိုင် – အာအက်ဖ်အေ သို့ပြောကြားချက်/၂၆ ဇူလိုင် )
“အရှိကိုအရှိတိုင်း အသိအမှတ်ပြုတယ်”လို့ NLD ဘက်ကပြောဆိုခဲ့တဲ့ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်အစိုးရ အဖွဲ့ဟာ (၂၀၀၈) ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေကို အသက်သွင်းပြီး ဖွဲ့စည်းထားတဲ့အစိုးရဖြစ်ပါတယ်။ (၂၀၀၈)ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့အညီ ဆောင်ရွက်သွားမယ်၊ အဲဒီ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ “ဥပဒေ” ကို ထိပါးလာမယ်ဆိုရင် အသက်ပေး ကာကွယ်စောင့်ရှောက်သွားမယ်လို့ ကျမ်းကျိန်ထားကြသူတွေလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
(ဓာတ်ပုံ – ဇူလိုင် ၂၅ နေ့က တွေ့ရတဲ့ ဒေါ်စုနဲ့ ဦးအောင်ကြည်။ DVB Photo)
Posted by oothandar on July 29, 2011 in Op-Ed, Tu Maung Nyo